CIT(CIT) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ ।​ नागरिक लगानी कोषमा प्रत्येक महिना पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका असंगठित क्षेत्रका विपन्न मजदुरको १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने भएको छ। कोषमा मजदुरको ५०० रुपैयाँ योगदान तथा नगरपालिकाले थपिदिने ५०० रुपैयाँ गरी मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले जम्मा गरिने भएको हो। यस विषयमा नागरिक लगानी कोष र फलेवास नगरपालिकाबीच द्विपक्षीय...
नागरिक लगानी कोषको हकप्रदमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीईटी) को हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। कोषले गत पुस २८ गतेदेखि १ः०.८२८४ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको छ। यो हकप्रदमा आज सोमबार बैंकिङ समयसम्म आवेदन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्ध आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ। कोषको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख ४० हजार...
नागरिक लगानी कोषको हकप्रद भर्नुभयो ? आवेदन दिने म्याद अब २ दिनमात्र बाँकी
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीईटी) को हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद अब २ दिनमात्र बाँकी रहेको छ। कोषले गत पुस २८ गतेदेखि १ः०.८२८४ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको छ। यो हकप्रदमा आज आइतबार र भोलि सोमबार बैंकिङ समयसम्म आवेदन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्ध आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ। कोषको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब...
हालसम्म ‘नागरिक पेन्सन योजना’ मा कति भए सहभागी ? यस्ता छन् सुविधाहरु
काठमाण्डौ । कोरोनाका कारण सामान्य प्रभाव परे पनि नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक पेन्सन योजना’ अहिले सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गत साउनको अन्तिम साताबाट सीआईटीले यो योजना लन्च गरेको छ। तर कोरोना कारण अधिकांश उद्योगधन्दा र निजी व्यापारव्यवसायमा असर परेका कारण यो योजनामा उल्लेख्य सहभागिता हुन सकेको...